Ireo indray ny vokatra natoraly natokana manokana ho an lehilahy te hikarakara n... - Masseuses et Escort Girls à Madagascar
Ireo indray ny vokatra natoraly natokana manokana ho an lehilahy te hikarakara n…
735 vues 29 juillet 2020 Je suis une masseuse ou escort girl
L'équipe709	 29 juillet 2020 0 commentaire
Ireo indray ny vokatra natoraly natokana manokana ho an lehilahy te hikarakara ny filahina sy hanatsara izany mba hahafahana manome fahafaham-po ho an pifankatia . Ka ireto ny produit izay bé panontany indrindra ka indro ary atolotra ho anareo ary aza misalasala manontany , na mandefa mp na tonga d miantso avy atrany @ reo numero ireo : 0343244665 / 0337200668
Vakio atr@ farany d teneno izay ilainao
1) #ESSENCE_KANGAROO , ilay vokatra tena efa fanta-daza amin'ny asany , satria sady miaro amin'ny aretina , no mitsabo am aretina ary indrindra azo ampiasaina am firaisana mba hampatanjaka sy haharitra ela . Ny asan'ny Essence Kangaroo dia mitsabo PROSTATE , impuissant , éjaculation précoce , aretina mahazo ny testicule , ny aretin-damosina , mitsabo ny Rein na Voa , manampy am famokarana tsirinaina ary manatsara ny kalitaon'ny tsirinaina ary ko manabetsaka azy , manala ny aretina mpipi lava na koa ts mety mahalatsaka pipi , manatsara iany koa ny ati-doha , mitsabo ny infertilité ho an lehilahy , mampatanjaka , ….
Azo ampiasain'ny lehilahy rehetra +18ans .
Izy io dia tsisy effet secondaire na kely am maha vokatra natoraly azy .
Raha marary ilay olona dia manao traitement 2 mois ary boîte 1 dia ampy anaovana traitement .
Fampiasana azy dia ohanina isakn 3 andro iany satria miasa mandritra ny 72h ny singany 1 .
Raha ampiasaina am firaisana dia ohanina 30min mialo arahina rano mafana .
2) #Bazooka , vokatra natoraly atrany . Ity indray dia natokana manokana hanangezana sy hanalavana filahina ho an ireo kely kely mahatonga fahasorenana ho an vadiny , na ko ho an ireo mba te hanangeza fotsiny .
Traitement 2 mois , boîte 1 ian d ampy traitement .
Fampiasana azy : ahositra ary masser-na indroa isanandro . Azahoana 3 à 6 cm eoeo .
3) #TITAN Gel , io koa dia mitovy fiasa am ilay BAZOOKA iany .
Misy koa ny ho an vevavy izay te hanangeza #nono (BOOBS OIL) na ko #fitombenana (BOOTY OIL)
Ho an izay liana tonga d aza misalasala miantso na mandef mp avy atrany .